Maninona no miasa @ teknika fampiharana Delta - Teknika fampiharana Delta
Maninona no miasa any amin'ny Delta Application Technics?
Delta Application Technics dia orinasa iray mitombo miaraka amina ekipa tanora misy antony. Izahay dia orinasa manavao izay mamporisika ny mpiasa hivoatra amin'ny eritreritra mialoha, any ivelan'ny-boaty, sns. Manentana ny saina ny mpiasa hianatra sy hitombo mandritra ny asany manontolo ao amin'ny Delta Application Technics. Ny milina fanoratana dia ampiasaina amin'ny indostria isan-karazany. Noho ny kolontsainay, sy ny fiara ary ny fahaizan'ny mpiasa tsirairay, dia manana toerana tokana izahay hamaly ny fangatahan'ny mpanjifanay.
Plant Production Production Plant Romania
Amin'izao fotoana izao ny Delta Engineering dia tsy misy toerana banga miavaka.